Onye Nkwalite: Ime Anya Gị na kamera kamera gị | Martech Zone
Ime kọntaktị anya dị oke egwu mgbe ị na-eji igwefoto gị. Guy Kawasaki nọ na-ekerịta otu ọ edebe igwefoto weebụ ya na tripod n'ihu nyochaa ya nke mere na obu mkparita uka di nma karie ka ya na ndi mmadu no na hangouts. Scott Atwood nke Google chimed na kwuru a kemmenyeujo obere ngwaọrụ ka ihe dị mfe karị.
Desktọpụ ProPrompter bụ periscope-dị ka ngwaọrụ ị nwere ike ịrịgo na laptọọpụ gị ma ọ bụ desktọọpụ ileba anya nke na-emegharị ọhụụ igwefoto gị site na ihuenyo ruo ebe ị na-achọ. Ma ị na-agba ọsọ ngwa teleprompter ma ọ bụ na-ekwu okwu na vidiyo, ị na-etinye windo ahụ n'ime ókè nke ngwaọrụ ahụ.
Ugbu a ị nwere ike ịdekọ vidiyo ma ọ bụ nwee vidiyo vidiyo ebe ị na-ele ndị na-ege gị ntị anya!
Tags: ahụ ikeanya na anyaihe nkwaliteseee2 anyaseeeyetwoeyeteleprompterwebcam
Mee 3, 2013 na 10: 57 AM
"SeeEye2Eye… na-emegharị ọhụụ igwefoto gị site na ihuenyo gị gaa na ebe ị na-achọ."
N'ezie, ọ dị ka ọ na-egosipụta enyo vidiyo nke onye gị na ya na-ekwurịta okwu na vidiyo ma na-egosi enyo n'ihu cam gị. Ya mere, ka ị na-ele ihe oyiyi ahụ yiri enyo, anya gị ga-elekwasị anya na igwefoto gị. Ọ gwụla ma m na-aghọtahie ihe. 🙂
Mee 3, 2013 na 11: 00 AM
Nwere ike ịbụ eziokwu @markfrisk: disqus! Ana m atụ anya inweta otu ma nwalee ya !!!
Mee 14, 2017 na 3: 23 PM
Douglas, ị mere?
Mee 17, 2017 na 10: 58 PM
N’eziokwu, mba. Enweghị m mmasị ịdekọ mkparịta ụka m na ntanetị ma ọ bụ site na Podcast ma ọ bụ vidiyo. Ọ naghị adị m ka ọ̀ bụ ihe m bu pụta ụwa.
Mee 6, 2013 na 3: 38 PM
Companylọ ọrụ m na-ekwuchitere vidiyo ọnụ na-ekwuru (http://www.liveonpage.com). Afọ isii anyị na-eme nke a, anyị bụ naanị otu ụlọ ọrụ na-agwa ndị ahịa ka ha jiri usoro ọkara ahụ. Ihe kpatara ya bu na anya a na-eme. Anyị na-achọpụta na ọnụego ntụgharị, oge nche na ibiaghachi ọnụego na-egosi na nlele anya na-eme ka ọdịiche dị. Ahụ zuru oke bụ gimmick. Naanị oge anyị na-ahụ onye isi ụkwụ na mkpịsị ụkwụ ya bụ mgbe mmadụ gafere ụlọ ahụ, yabụ anyị na-eleghara ha anya.